शाक्य मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त, को – को भए मन्त्री ? – GALAXY
शाक्य मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त, को – को भए मन्त्री ?
काठमाडौं – एमाले विभाजन भएकै दिन बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री फेरिएको छ । बुधबार डोरमणि पौडेलले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएलगत्तै एमालेकै नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएकी हुन् । शाक्यलाई प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाईंले बुधबार राति शपथ गराएका छन् ।
शाक्य नेपालको पहिलो महिला मुख्यमन्त्री हुन् सफल भएकी छन्। नेकपा एमाले औपचारिकरुपमा विभाजन भएपछि पौडेलले बुधबार संसदीय दलको नेता र मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । पौडेलको राजीनामापछि शाक्यले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएकी हुन् ।
यसअघि पौडेलले दलको नेताबाट राजीनामा गरेसँगै अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई निर्विरोध रुपमा संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको थियो ।सपथ ग्रहण लगत्तै मुख्यमन्त्री शाक्यले दुई मन्त्री नियुक्त गरेकी छन् । उनले केशव पाण्डेलाई आन्तरिक मामला तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री तथा कृष्ण खनाललाई सामाजिक विकास मन्त्री नियुक्त गरेकी हुन् ।
बागमती प्रदेशमा एमालेका बहुमत सांसद भएकाले त्यसैलाई देखाएर शाक्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको हो। प्रदेश सभामा कूल १०९ जना सदस्यमध्ये एमालेका ५५ जना छन्।
एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले बुधबार नै एमाले समाजवादी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका छन्। तर, बागमती प्रदेश सभामा रहेका कति जना उनको पक्षमा लाग्छन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। शाक्य यसअघि नेपाल पक्षमै थिइन्। तर, उनले विभाजनमा साथ दिइनन्।